Hamantarana ny TVA : hampiasaina ny fitaovana elektronika | NewsMada
Hamantarana ny TVA : hampiasaina ny fitaovana elektronika
Nampahafantarina, omaly, ny fitaovana manokana hamantarana ny hetra Taxe sur les valeurs ajoutées (TVA) eny amin’ny orinasa sy mpandraharaha. Fitaovana elektronika apetraka eny amin’ny toerana fandraisam-bolan’ny orinasa, mandray sy mandefa ny antontam-baovao mikasika ny TVA.
Mandritra ny telo volana ny tetikasa andrana, ka miisa 250 ny fitaovana mpandray ny antontam-baovao ary 500 ny mpandefa. Mahatratra 5 miliara Ar ny tetibola natokana hanaovana ny tetikasa andrana, iarahana amin’ny orinasa japoney MBC international. Nambaran’ny tale jeneralin’ny hetra (DGI), Razafindrakoto Iouri Garisse, fa misy amin’ireo tranombarotra na orinasa, efa manana ny fitaovana mandray ny antontam-baovao, ka ny mandefa antontam-baovao sisa, mila apetraka.
Amin’ity andrana ity, hametrahana ity fitaovana manokana ity ny sehatra telo tena mifandray mivantana amin’ny mpanjifa. Ao anatin’izany ny trano fandraisam-bahiny, ny fisakafoana ary ny fivarotana kojakojam-panorenana (quincaillerie). Tena voakasika amin’izao voalohany izao koa ny orinasa madinika sy salantsalany (PME), anisan’ny tena sarotra ho an’ny fanjakana ny manangona ny hetran’izy ireny.
Notsiahivin’ny DGI fa adidy tsy maintsy aloan’ny mpivarotra ny hetra. Ankoatra ny famantarana ny hetra TVA, ahalalana ny varotra isan’andro vitan’ny orinasa na tranombarotra koa ity fitaovana ity. Ahazoana mamaritra ny hetra tambatra (impôt synthetique) sy ny vola kirakiraina ihany koa ny antontam-baovao avy aminy. Tsy azo anaovana hosoka ilay fitaovana ary azo arovana ao anatin’ny 15 taona.